युवा अवस्था कति पटकसम्मको यौ*नक्रियालाई सामान्य मानिन्छ ?::देश र जनताप्रति समर्पित
युवा अवस्था कति पटकसम्मको यौ*नक्रियालाई सामान्य मानिन्छ ?
दुई जना (जोडी) बीचको नितान्त निजी मामिला हो सेक्स अर्थात यौनसम्पर्क । त्यसैले कतिपटक हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न त्यति सान्दर्भिक पनि होइन । फेरी, यौनसम्पर्क घटबढ हुनुमा जोडीको रुची, अवस्था, बाताबरण, उमेर, स्वास्थ्य आदिको प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले सेक्स कतिपटकलाई सामान्य मान्ने भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर दिन सकिदैन ।
यस्तो थियाे ५० बर्ष पहिलाकाे याै*न तरिका हेर्नुस् राेचक जानकारी
स्तन स्पर्श गर्दा किन आनन्द आउँछ , यस्ताे छ डाक्टरकाे भनाइ
के हामी तयार छाै याैनसुखमा असमानताबारे कुरा गर्न ?
तपाईंको याै*न समय कति लामाे टिक्छ ?
शारीरिक सम्बन्ध पछि यस्तो साेच्ने रहेछन पुरुषहरु
के हाेे याैन राेग ? यसरी पत्तै नपाइ लाग्नसक्छ ? हेर्नुस्
किन याै*न सम्बन्ध बारे नेपालीहरु खुल्दैनन् ? यस्ताे छ डाक्टरकाे भनाइ नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिंदैन । यौनका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, वा त्यसलाई असाध्यै जटिल वनाईन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो...
यस्तो थियाे ५० बर्ष पहिलाकाे याै*न तरिका हेर्नुस् राेचक जानकारी रुसको एउटा गुफामा धेरै वर्षअघिका मानिसका दुई अलग–अलग प्रजाति फेला परेको छ । करिब ५० हजार वर्षपछि वैज्ञानिकहरुको एउटा समूहले पत्ता लगाएको छ कि...
के तपाई याै’न इच्छा बढाउन चाहानु हुन्छ ? खानुहाेस् यी खाने कुरा १. गोलभेंडा : गोलभेंडालाई रातो रंगमा बदल्ने लाइकोपिन नामक तत्वले मानिसमा यौ’नइच्छा बढाउन सहोग गर्दछ । यसले पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतराबाट पनि जोगाउँछ । २.पालुङगो : पालुङगोको साग...